नागढुंगामा बरामद १ करोड ४७ लाख कसको ? प्रहरी भन्छ– ‘पैसा साट्नै एक हप्ता लागेको देखिन्छ’
महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुंगाले स्रोत नखुलेको १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ चेकजाँचका क्रममा बरामद गर्‍यो ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका– २ मा रहेको उपत्यका छिर्ने मुख्य नाका नागढुंगामा चेकजाँच गर्ने क्रममा कपिलवस्तुबाट काठमाडौं आउँदै गरेको प्रदेश ३ –०१–०२३ च २२५९ नम्बरको ह्युन्डाइ क्रेटा कारको डिकीमा स्पेयर टायरमुनि ३ वटा कालो झोलामा राखेको अवस्थामा १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ फेला परेको थियो ।
प्रहरीले कपिलवस्तु वाणगंगा नगरपालिका–४ का २२ वर्षीय चालक संगम थारूको साथबाट थप ८६ हजार रुपैयाँ बरामद गरेको थियो ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाका हुँदै भारतबाट नेपाल पैसा ल्याइएको खुलेको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी नायब निरीक्षक (डीएसपपी) प्रमेस विष्टका अनुसार उनीहरूले भारतीय रुपैयाँलाई नेपाल र भारतको सीमा नाकामा केही दिन लगाएर साटेपछि नेपाल भित्र्याएको देखिएको छ ।
उनीहरूले भारतीय रुपैयाँलाई ३/४ लाखका दरले स्थानीय व्यापारीसँग साट्ने र नेपालमा ल्याएर एक ठाउँमा जम्मा गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई त्यो पैसा साट्नका लागि लगभग एक हप्ता लागेको थियो ।
‘उनीहरूले एक हप्तामा त्यो पैसा स्थानीय व्यापारीसँग साटेको देखिन्छ,’ एक प्रहरी अधिकृतले लोकान्तरसँग भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिनमा ५ हजार भारतीय रुपैयाँभन्दा धेरै पैसा साट्न अनुमति दिँदैन, त्यसैकारण उनीहरूले स्थानीय व्यापारीसँग साटेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पैसा लिएर आउने चालक संगम थारू र भारतको गोरखपुर घण्टाघर घर बताउने ३० वर्षीय अमितकुमार गुप्ता यसअघि नेपालमा कुनै अपराधमा संलग्न रहेको रेकर्ड नभेटिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सोमेन्द्रसिंह राठौरले बताए ।
‘यसभन्दा अगाडि कुनै पनि अपराधमा संलग्न भएको देखिँदैनन,’ एसपी राठौरले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्‍यौं । अगाडि अपराधमा संलग्न नपाएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पठाएका छौं ।’
अब सम्पत्ति शुद्धीकरणले स्रोत नखुलेको पैसा र उक्त पैसा के कारण भित्रिएको हो भन्ने अनुसन्धान गर्नेछ ।
त्यति धेरै पैसा के कामका लागि आयो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन बाँकी छ ।
के का लागि आयो ? कसले पठायो ? स्रोत के भन्ने कुरा त सम्पत्ति शुद्धीकरणले पत्ता लगाउला, तर कुनै अपराधका लागि आएको हो कि होइन भन्ने विषय भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ ।
विना स्रोतको पैसा लागूऔषध, चोरी, तस्करी, अपहरण जस्ता आपराधिक गतिविधिमा लगानी हुने गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रमेश विष्ट बताउँछन् ।
प्रहरी स्रोतका भनाइलाई आधार मान्ने हो त्यो पैसा तस्करहरूले सुन तस्करीका लागि ल्याएको हुनसक्ने देखिन्छ । केही समयअगाडि तस्करी भएको सुनको पैसा भुक्तानी स्वरूप आएको पनि हुनसक्ने प्रहरीको बुझाइ छ ।
‘त्यो पैसाको हिसाब हेर्ने हो भने २ किलो सुनको पैसा हो,’ एक प्रहरी अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘नेपालमा भन्दा भारतमा सुन महंगो हुँदा सुन तस्करहरू सक्रिय हुने गर्छन् ।’
आज (बुधवार) नेपालमा भन्दा भारतमा सुन ५ सय रुपैयाँ प्रतितोला महंगो छ ।
नेपालबाट भारततर्फ तस्करी हुँदा किलोमा नै तस्करी हुने र तोलामा २ रुपैयाँ मात्र मूल्य फरक हुँदा पनि धेरै फरक पर्ने गर्छ ।
नेपालमा समय–समयमा सुन तस्करीको घटना बाहिरिन्छन् ।
कात्तिक १ गते प्रहरीले वीरगञ्ज महानगरपालिका ५, रेशमकोठीस्थित गणेश अपार्टमेन्टबाट २३ किलोभन्दा बढी सुन बरामद गरेको थियो ।
त्यसक्रममा प्रहरीले १ केजीका १३ वटा बिस्कुट, मझौला बिस्कुट ४६ थान (८ केजी ५७६ ग्राम) र साना बिस्कुट १०० ग्रामका १० थान –एक केजी) बरामद गरेको थियो । सुनका गरगहना ६८१ ग्रामसहित त्यसको कुल तौल २३ किलो थियो ।
त्यो भन्दा अगाडि साउन १४ गते उपत्यका प्रहरीकै संलग्नतामा १५ किलो सुन फेला परेको थियो तर पछि परीक्षण गर्दा १ किलो मात्रै सुन भएको पुष्टि भएको थियो ।
भागरथी र अभियुक्त दुवै विद्यार्थी हुँदा शिक्षकहरू स्...
कांग्रेस नेता जोशीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर तर सुधारोन्मुख : अस्पताल
संघर्ष र पतिको साथले उपसचिवमा नाम निकालेर सहायक सीडीओ बनेकी किरण
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न, संसदको सामना गर्नुहुन्छ : प्रमुख सल्लाहाकार रिमाल